स्वतन्त्र मधेश कहिले स्वतन्त्र भयो? भोली मान्छे उठ्लान मलाई पहाड चाहियो हिमाल चाहियो भन्दैमा के दिदै हिड्ने ! (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
स्वतन्त्र मधेश कहिले स्वतन्त्र भयो? भोली मान्छे उठ्लान मलाई पहाड चाहियो हिमाल चाहियो भन्दैमा के दिदै हिड्ने ! (भिडियो सहित)
सिके राउतले हस्ताक्षर गरेको ११ बुदे सहमतिको जनकपूरमा पुग्ने बितिक्कै धज्जी उड़ाए। यो सिकेको सहमतिको नाउमा “मधेश” लाई छुट्टै देश बनाउने ग्रैण्ड डिजाईन् हो। सहमति गरे जस्तो गर्ने र कार्यकर्ता लाई “Free Madhesh” को नारा बोल्न लगाउने र झण्डा उचाल्न लगाउने दोहोरो भुमिका हो। हाम्रा देशका नेताहरु लाटा देखिएकै हुन् त ? एक सिके राउतको पञ्जामा खेल्न पुगेकै हुन त?
यसै संदर्बमा अस्ट्रेलिया बाट शिव न्यौपानेको आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको यो भिडियो पनि हेर्नुहोस
सिके र केपी सरकारसंग २०७५ फागुन २४ गते शुक्रवार ११ बुदे सहमति भयो । जेलबाट बिहिबार निस्किसकेपछी शुक्रवार यो भ्रद्र सहमती गरियो ।सरकारको प्रतिनिधि पात्रकारुपमा गृहमन्त्री समेत रहेका राम बहादुर थापा ‘बादल’ र स्वतन्त्र मधेशका संयोजक चन्द्रकान्त रावत ‘सिके’ ले संयुक्त रुपमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे । राजनीतिको मुलधारमा आउने गरि “सवतन्त्र मधेश” को मुद्धालाई अन्त गर्दै सहमिति गरे ।सहमति पछिको गतिविधि हेर्दा सहमतिको पालना भएन ।किन भएन ? जनतालाई भ्रममा पारेर सिकेसंग किन केपी, प्रचण्ड र गृहमन्त्रीले यस्तो सहमति गर्न बाध्य भए । हजारौ प्रश्नहरु चौतरफीबाट उब्जिन थालिसके ।
सरकारले पछिल्लो बिज्ञप्ति निकालेको छैन् । सिकेले कुनैपनि धारणा जनकपूर गए पछाडी दिनुभएको छैन् ।सहमति पत्र काग़ज़मा मात्र सिमित हुन पुग्यो । सरकार का दुई प्रभावकारी नेता भिम रावल र नारायकाजी श्रेष्ठ ले विरोध गरिसके । सरकार र नेकपाका अन्य विश्वास गरेका नेताहरु सहमति र सरकारको बचाउ तिर लागि परेका छन् । अब के हुन्छ ? सहमति तिन मानेनन् सिकेका पक्षधरहरुले । किन सहमति विपरित अपव्याख्या गरियो । ११ बुदे सहमतिमा गम्भिर त्रुटि यस्तो छ ।
नेपाल कोहिपनि २/४ जनाको होईन् । तिन करोड नेपाली को हो । स्वाभिमान बचाउनकालागि सवैले आआफ्नो तर्फबाट महत्वपूर्ण भुमिका खेलौ । अन्यथा देश हाम्रै आखॉं अगाडी बिभाजित हुनसक्ने ख़तरनाक संकेत र डिज़ाइन् सिके रावतबाट गरिदै छ भन्ने आभास भइरहेको छ । हिजो खुकुरी कै भरमा मेरो देशको भुभाग पूर्खाहरु बचाए । आज खुकुरीसंगै आधुनिक हतियार उठाउनु परेपनि सबै तयार हुनेछौ भन्ने संकल्पसहित उठौँ , जागौ र देशको राष्ट्रीय झण्डामुनी बसेर नेपालको रक्षा गरौ । जय स्वाभिमान , जय चन्द्र सुर्य , जय युवा